Nhungamiro yekuisa ReactOS nhanho nhanho | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekuisa ReactOS inoshanda sisitimu nhanho
Isu tato taura nezve ReactOS pane ino blog kashoma. Izvo ndezvekushandisa system yakagadzirirwa pasi pekudzidziswa kweReactOS Foundation, chirongwa chakatangwa makore apfuura uye chakaburitswa pasi pemarezinesi eGPL neBSD, chakanyorwa zvakazara muC mutauro wemutauro, wakasununguka uye yakavhurwa sosi. Kunyangwe zvakafanana neLinux, haisi kugovera kana sisitimu inoenderana neTorvalds kernel, asi inoshandisa iyo yega hybrid kernel uye graphical interface inonzi ReactOS Explorer inoyeuchidza iyo Windows system ...
ReactOS (React Inoshanda Sisitimu, uko React inoreva "kuita" kwekusagutsikana neMicrosoft system) inomuka kugadzira yemahara sisitimu ine binary kuenderana kweMicrosoft Windows NT software uye madhiraivha. Kunyangwe pakutanga yaifungidzirwa kuti inowirirana neWindows 95 (apo chirongwa ichi chaidaidzwa kuti FreeWin95), nhasi ichi chinotsigira software yeWindows NT 5.x nepamusoro kernel, kureva kuti, yeWindows XP uye software yepamusoro. Yakave zvakare inotakurirwa kune mamwe maumbirwo, kwete chete x86-32, asiwo ye AMD64 neARM.
1 Zvishoma zvishoma nezve ReactOS
2 Nei uchiisa ReactOS?
3 Zvishoma zvinodiwa kuti uise ReactOS
4 Nhanho-nhanho ReactOS kuisirwa
4.1 Dhawunorodha ReactOS
4.2 Kuisa iyo system
Zvishoma zvishoma nezve ReactOS
Kunyanya, vagadziri vako vanoshanda kuita API, uye zvimwe zvinhu zvakaita seWindows Registry asi yakavhurwa sosi, kune izvi ivo vanoshandisa reverse injinjini pane chigadzirwa cheMicrosoft kuti vanzwisise mashandiro uye nekuzvienzanisa. Iyo zvakare inosanganisa zvimwe zvikamu zvekuenderana dhata reiyo inozivikanwa Wine waini (inonzi "zvisina maturo"), nenzira iyi, iwe unogona kuisa yemuno Windows software pane ino system uye inoshanda, kunyangwe isiri ese software iri 100% inoenderana.
Vamwe vagadziri vakakanda matombo purojekiti, vachiti vakopa zvimwe zvikamu zveWindows system, vakashandisa mamwe mafaira eMicrosoft system uye kuti yaive neWindows Assembly kodhi yakabviswa uye yakabatsira muchirongwa. Chimwe chinhu icho, sezvaunonzwisisa, kuve Windows yakavharika yevaridzi system ingave zvisiri pamutemo. Zvisinei, ReactOS yakaenderera mberi nekuvandudzwa kwayo uye kupomerwa uku hakuna kuita chero mutemo zviri pamutemo mune izvi.
reactOS, akatumidzwa zita remusunguri weprojekti Jason Filby kubva kuOracle kuchirongwa, chine zvayakanakira nezvayakaipira. Chinhu chakashata ndechekuti haina rutsigiro rwakakosha uye kushomeka kwevatsigiri nevasimudzi (kunyangwe zvishoma nezvishoma ivo vava kuwedzera, asi kuwana zano, kune vanopfuura chiuru vanobatanidzwa mukuvandudzwa kweWindows uye zvishoma kupfuura 1000 muReactOS, mukuwedzera ivo vanofanirwa kudzidza nezve Windows dhizaini uye vozovandudza ...) inoita kuti kunyangwe makore ekuvandudza, ichiri isina kukura uye muchikamu cheAlfa chekusimudzira. Nekudaro, iri imwe sarudzo yakanaka kana iwe uchida kushandisa Windows software usina kana Microsoft inoshanda sisitimu pamushini wako kana kana iwe usiri kuda kushandisa Linux distro neWine chero.
MinGW ndechimwe chezvivakwa zvekuvaka, ReactX chikamu chinobvumira kuenderana kana kutsigirwa neDirectX, kushandisa OpenGL ye3D seyemapapu apo mhinduro yakakura inowanikwa. Sezvatakambotaura, zvakare inoshandisa kodhi kubva kune mamwe mapurojekiti akadai seWine, sezvo ichibatsira kubva kuWin32 API, NTDLL, USER32, KERNEL32, GDI32 uye Advapi zvikamu zvaro, nepo zvimwe zvikamu zvinogadzirwa neReactOS programmers kubva kune akasiyana fomu .
FreeBSD imwezve inoshanda sisitimu iyo ReactOS yakwereta kodhiNezve kugadzirisa netiweki sisitimu, ivo vatendeukira kune yakavhurwa sosi inoshanda sisitimu iyo ine yakanakisa yezvose (uye kubva kune iyo Linux inofanira kudzidzawo). Iyo yese TCP chikamu saka chakateedzerwa kubva kuFreeBSD kodhi yeReactOS. Tinogona zvakare kusimbisa zvimwe zvikamu zvakaita seFreeType yemafonti, 3D Mesa yekushandura OpenGL, UniAT yevatyairi veATA, uye raibhurari yeFullFAT yekuenderana kweFAT, mukuwedzera NTFS inotsigirwawo mushanduro dzichangoburwa, uye kunyangwe kuverenga nekunyora muExpT3.
Nezveramangwana, kuenderana kunotarisirwa kuvandudza uye chirongwa kukura zvishoma nezvishoma. Pamusoro pe Windows NT parizvino inotsigirawo kuenderana neJava, OS / 2 uye DOS kunyorera. Kunyangwe isiri yemakwikwi yeLinux, ReactOS chirongwa chakakura icho mamwe mapurojekiti anogona zvakare kutora uye icho chinogona kudzidziswa kubva pakuvhurwa sosi. Neichi chikonzero, ReactOS yakatogashira kumwe kuzivikanwa uye mibairo ...
Nei uchiisa ReactOS?
Ndaigona kukuudza zvokupfeka ReactOS inogona kukubatsira iwe kudzidza uye uzvizive neimwe nzira yekushandisa, kuti uone kwayakabva kuti udzidze zvakawanda nezveWindows, sezvo kuvharwa sosi isu tisingakwanise kuona kuti zvinoshanda sei, zvakadaro muReactOS isu tinogona Aigona zvakare kukuudza kuti anogona kuendesa imwe nzira kune Waini nemamwe mapurojekiti akafanana.
Asi pamwe chikonzero chakanakisa chekushandisa ReactOS kuve ne "Windows", inoshanda sisitimu inokwanisa kumhanyisa DOS software, uye Windows NT usinga vimbe nesisitimu yakavharwa seMicrosoft Uye kune yakanyanya kunetseka nyaya yekupa marezinesi, izvi zvinogona kuva zororo.
Zvishoma zvinodiwa kuti uise ReactOS
Unogona kudhawunirodha Live Live yeiyo inoshanda sisitimu kuti ugone kuishandisa pasina kuimisa kana BootCD, inova ISO inogona kuiswa pakombuta yedu kana mumushini chaiwo. Iyo inongobata ingangoita 90MB yakatsikirirwa muZIP uye kana isina kuvhurwa inosvika kupfuura 100MB, asi hapana kana ichienzaniswa neWindows, saka ReactOS haidi zviwanikwa zvakawanda:
CPU x86 kana x86-64 Pentium kana yakakwira.
64MB RAM (256MB inokurudzirwa)
IDE / SATA hard drive yeinosvika 350MB.
Bhuti kupatsanura muFAT16 / FAT32 fomati.
2MB VGA mifananidzo yemagetsi (VESA BIOS 2.0v kana yepamusoro)
Yakajairika keyboard uye mbeva.
Sezvauri kuona, chakareruka uye chinogona kuiswa kunyangwe pamidziyo yekare ...
Nhanho-nhanho ReactOS kuisirwa
Yokutanga ndeye dhawunorodha ReactOS ISO, mune iyi BootCD. Zvazviri handei kune iyi link wobva wadzvanya pane Dhawunirodha BootCD. Chiratidziro chinotevera chichaonekwa uye iwe unogona kupa imwe mari kuchirongwa kana kana uchida kuchirodha mahara nekudzvanya pa "Kwete, ndatenda. Ngatienderere mberi nekutora! » uye anokuendesa zvakare kuSourceForge yekurodha pasi:
Isu tatova neiyo ISO yakadhindwa iyo inouya yakamanikidzwa muZIP. Isu tinosunungura uye tobva tazvipisa kuCD. Iwe haudi DVD kana chero chinhu chakadai, sezvo sekutaura kwandaita kuri kuita 100MB. Kana iwe uchizoishandisa mumuchina chaiwo, haufanire kuipisa, unogona kushandisa zvakananga iyo ISO. Kana iwe uchizoisimudza pakombuta, iwe unofanirwa kuwana yako BIOS uye nekupa pamberi peiyo Optical drive kuti itarise iyo system pane CD yawakapisa ...
Kuisa iyo system
Iye zvino isu tinotanga kumisikidza pachayo. Isu tinosarudza mutauro watinoda, mune ino Spanish (Spanish):
Ipapo isu tinodzvanya ENTER ku gadza iyo system kushanda:
Iye zvino tinosimbisa kudzvanya ENTER zvakare:
Inotiratidza iyo kumisikidzwa kwehardware kwaonekwa, kana chiri chishandiso chemazuva ano chinogona kuunza matambudziko, ndosaka ndichikurudzira kuiisa mumuchina une VMWare kana VirtualBox, nezvimwe. Isu tinoenderera neINTRO:
Zvino ratidza iyo nzvimbo inowanikwa kupatsanura. Kana iri komputa isina imwe sisitimu inoshanda, tinogona kusarudza nzvimbo yese sekuonekwa kwayo pachiratidziri (zvakafanana kana iri muchina chaiwo). Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchita sisitimu yekushandisa, iwe unofanirwa kunge wakagadziridza chikamu kuti uwane nzvimbo yeReactOS ... Enderera neENTER.
Sezvauri kuona, kuisirwa kwacho kuchakuyeuchidza nezveWindows XP. Iye zvino zvinotitaurira kana tichida kuenderera tichimanikidza ENTER kumisikidza iyo chikamu:
Isu tinosimbisa kuti isu tinoda kuenzanisa chikamu uye tinya ENTER kutanga gadza mafaera...
Saka zvino tinomirira kuti iisweZvinotora nguva shoma, sezvo iri yakareruka uye kunyangwe zviine zviwanikwa zvishoma haizove anopfuura masekondi mashoma kana maminetsi.
Zvino, kana isu tiri kuisa pamushini pasina imwe inoshanda sisitimu kana muchina muchina, tinya ENTER kuti ubvume yekutanga sarudzo. A) Hongu iyo bootloader ichaiswa Pane diski. Kana iwe uine imwe system, ini ndingapa zano rekupedzisira sarudzo kana kuiisa pane floppy disk, kuti usapindire nayo.
Iye zvino izvo ReactOS zvikamu zvatoiswa, zvinongoramba zvichitangazve. Dhinda ENTER.
Yekutanga system yekutanga inosvikaZvave kutosvika ... Nenzira, kana ikakukumbira kuti ubaye kiyi kuti uwane iyo optical drive (CD), usaite hanya, mushure memasekondi mashoma iyo OS ichatanga:
Kana mune anotevera reboots iyi skrini inoratidzwa kwatiri, unofanira kungomirira kana kusarudza zvakananga sarudzo yekutanga:
Nguva yekutanga yaunotanga inokuratidza yekuisa menyu yeReactOS iyo iwe yaunofanirwa kupfuudza ne Inotevera, Inotevera, Inotevera (gadzirisa mutauro), isa zita rekushandisa uye sangano, Inotevera, password yemutungamiri uye zita remakomputa, Inotevera, nguva yenguva, Inotevera, tinomirira kuti iise, uye inodzoka kuti itangezve ...
Zvinogona kutikumbira kuti tiise mamwe madhiraivha, maitiro acho ari nyore, Anotevera, Kupedzisa, Anotevera, Kupedzisa ...
Isu pakupedzisira tine ReactOS desktop yekuongorora, Ndinokukoka iwe kuti ubvunze, kana iwe uchibva kuWindows ichave inozivikanwa ...
Usakanganwa kusiya zvaunotaura kana kusava nechokwadi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Maitiro ekuisa ReactOS inoshanda sisitimu nhanho
Rakanaka kwazvo rakazara bhuku! Ndatenda! Pasina kupokana chirongwa ichi chinoramba chichiwedzera kukura nekukura.
Pindura kuna jonaspm
Eduardo Sanabria akadaro
Mhoroi, ndine ReactOS lotus pachiratidziro uye hazviitike kubva ipapo. Izvo zvakaitika kune mumwe munhu here?
Pindura Eduardo Sanabria
Mhoro, urikuyedza pamushini chaiwo? Tangazve iyo uye yakagadziriswa. Zvakaitika kwandiri ... Kwaziwai!
inounza bhurawuza ripi?
Eduardo Alvarez placeholder mufananidzo akadaro
zvese zvakanaka ... kusvikira zvanamatira mune yekutanga. reboot uye haina kufambira mberi, ndakaiisa pane iyo Lenovo pc ... isina chaiwo muchina
Pindura Eduardo Alvarez
Anodiwa ... vamwe vandinoona nekushushikana kwakasimudzwa: Ndakaiisa paLenovo pc, inoisa mushe ... ASI inoramba yakanamatira mune ye1. system kutanga uye hapana kufambira mberi Nei izvi zvichiitika? ... mumwe munhu anoziva. Ndinovimba vamwe mhinduro
juan arellano akadaro
Mhoro zuva rakanaka, ini ndakariedza mu virtualbox virtual muchina, mushure mekutanga kwekutanga inofanira kuiswa muDebug modhi, nekuti yekutanga sarudzo inorembera system
Pindura kuna juan arellano
Ini ndakadhawunirodha iyo Iso, ndokuchinjisa kuCD ndokuiisa muPresario yeSG3613LA desktop renji
uye hazvindipfuure kubva pachiratidziro (kusarudzwa kwemutauro mukumisikidza)
Iyo keyboard inomira kundiziva ini kana inokiya zvakakwana nekuti haina kupindura
Ndakaedza ne USB uye nePS2 uye zvakafanana mhedzisiro.
Ini ndinoona yakawanda ramangwana reiyo OS, kunyangwe ichinonoka asi ini ndichiri nekutenda mazviri.
Mhoro. Ini ndakaisa iyo yakatsva cd uye hazviitike kupa intro kune iyo yekumisikidza
Mangwanani akanaka ndine dambudziko nekutarisa ssl chitupa kugadzirisa mapakeji nezvirongwa. »Ndingagadzirisa sei iko kukanganisa?» ReactOS 0.4.7 kuvaka 20171124-0.4.7 - release.GNU_4.7.2
Kuzivisa NT 5.2 (Vaka 3790: Service Pack 2)
Mhoroi, ndakaiisa mumalaptop maviri ekare, acer yakazara 2600 uye toshiba satellite sa50 asi handikwanise kuisa madhiraivha eXp, saka handina wifi mune chero iwo pese pandinoisa madhiraivha ewifi andinowana meseji yekukanganisa Kanguva kadiki apo bhuruu bhuruu rinowoneka uye ndinofanira kudzoreredza iyo OS zvakare nekuti haina kutanga futi, inogara pachiratidziro chekutanga chekupindura, iwe rova ​​kupinda uye kutangazve kazhinji, iniwo ndaona kuti iro desktop rinobhenekera. Iyo react vhezheni ndeye 0.4.7.
Mhoroi, Ko Reactos inoda imwe mhando yeantivirus?
Ndakaedza kuiisa pane pentium 4 2.66hz uye ini handina kukwanisa kuzviita, iri Toshiba x55u uye inogara ichindipa bhuruu screen ... hapana vhezheni kubvira 3.0.15 3.0.17 uye yekupedzisira 2017 uye ini handisati ndambokwanisa kuiisa, inogara ichindipa iyo bhuruu skrini.
joge horace akadaro
Pane 500 GB hard drive ndine yekare win 7 bit 32 sp1 x 86 padhuze neiyo ini ndisingagumi os 3.5.5 iri kukura mu36 GB uye isina kugoverwa partition ye150 GB.Ava vaviri vanowirirana zvakanaka kunyange win iri bit 32 uye eos idiki 64. Mubvunzo wangu ndewkuti chikamu icho chisina kupihwa chinogona kutora ReactOS,
Pindura Joge Horacio
Yakanaka kwazvo posvo. Mune yangu nyaya, ndinoda kuziva kana ichigona kuiswa kubva kuUSB uye kana pakutanga ndinogona kuichengeta kune pendrive. Ndatenda, ini ndakamirira komendi yako
Mubvunzo ndewokuti internet inoshanda here?
Gufw: gadza yakapusa Firewall pane yako Ubuntu
Bleachbit, iyo Linux CCleaner